QAANUUNKA ARRIMAHA KHAASKA AH - BancaNEO
Taariikhda dhaqan galka: 1st July 2021
Ku soo dhawow Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee www.bancaneo.org Kaas oo ay leedahay oo ay maamusho MY NEO GROUP TRUST.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu ka kooban yahay dulmar ku saabsan ururinta, isticmaalka iyo muujinta xogtaada khaaska ah. Haddii ay dhacdo in macluumaadka uu daboolo mid ka mid ah adeegyadayada waxaan si cad kuu tilmaami doonnaa tan. Si loo muujiyo ixtiraamka xuquuqdaada gaarka ah, MY NEO GROUP TRUST waxay habaysaa xogta shakhsi ahaaneed ee la ururiyey si waafaqsan sharciga ilaalinta sharciga ee xogta shakhsi ahaaneed ee Jamhuuriyadda Talyaaniga, Xeerka Ilaalinta Xogta Guud iyo falalka kale ee sharciga ah sida Awaamiirta Lr. 95/46/EC ee Baarlamaanka Yurub. Shaqaalaha, wakiilada, iyo qaybaha kale ee heli kara xogtaada shakhsi ahaaneed waxaa ka go'an inay hubiyaan ammaankeeda xitaa marka la joojiyo xiriirka qandaraaska.
Fadlan si taxaddar leh u akhri Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah sida ay u khuseyso markaad isticmaaleyso Adeegyadeena ama booqo Websaydhadeena ama isticmaal barnaamijkeena. Waxaan u qaadaneynaa asturnaanta iyo ilaalinta macluumaadka si dhab ah waxaana naga go'an inaan la socodsiino macluumaadka shaqsiyeed ee kuwa aan la shaqeyno, ha ahaato macaamiisha, alaab-qeybiyeyaasha ama asxaabta, si masuuliyad leh iyo qaab buuxiya shuruudaha sharciga ah ee dalalka aan ka shaqeyno.
Kalsoonida Kooxdayda neo ("Bancaneo”,“ Us ”,“ we ”,“ our ”) ayaa mas'uul ka ah uruurinta, adeegsiga iyo shaacinta macluumaadkaaga shaqsiyeed. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan sida aan u ilaalino ama u isticmaalno xogtaada, fadlan email noogu soo dir cinwaanka info@bancaneo.org.
Xogta Shakhsiyeed ee La Ururin Karo
Waxaan ururin doonaa xogta soo socota ee adiga kugu saabsan:
Macluumaadka aad na siiso:
Waxaad na siin kartaa macluumaad, oo ay ku jiraan macluumaadka shaqsiyeed, ee ku saabsan naftaada markii aad isdiiwaangeliso inaad adeegsato Adeegyadeena, tusaale magacaaga iyo cinwaanka emaylkaaga. Tani waxay sidoo kale ka mid tahay macluumaadka aad ku bixiso adoo adeegsanaya sii wadida Adeegyadeena, kaqeybgala guddiyada wada hadalka ama howlaha kale ee warbaahinta bulshada ee boggayaga internetka ama App, gal tartan, dallacsiin ama sahan, iyo markaad soo sheegto dhibaatada Adeegyadeena. Macluumaadka aad na siiso waxaa ka mid noqon kara magacaaga, cinwaankaaga, cinwaanka e-maylka, lambarka taleefanka, macluumaadka maaliyadeed (oo ay ku jiraan kaarka deynta, kaarka deynta, ama macluumaadka koontada bangiga), sababta lacag bixinta, deegaanka juquraafi ahaan, lambarka amniga bulshada, sharraxaadda shakhsi iyo sawir .
Waxa kale oo laga yaabaa inaan u baahanahay macluumaad dheeraad ah oo ganacsi iyo / ama aqoonsi ah oo kaaga yimaada tusaale ahaan, haddii aad dirto ama aad hesho macaamil qiimo sare ama mug mug leh ama sida loogu baahan yahay si aan ugu hoggaansano waajibaadkayaga ka dhanka ah lacagta la dhaqay ee sharciga waafaqsan.
Markaad siineysid xogta shakhsiga ah ee shaqsi kasta (marka laga reebo naftaada) oo tusaale ahaan laga yaabo inay naga hesho lacag bixinno qeyb ka ah adeegsiga Adeegyadeena, waxaad ballanqaadeysaa inaad ogolaansho ka heshay shaqsigaas si aad noogu soo bandhigto xogtiisa / keeda. iyo waliba ogolaanshihiisa / keeda ogolaanshaha aruurinta, adeegsiga iyo bixinta macluumaadka shaqsiyadeed ee noocan ah, ujeeddooyinka ku xusan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Macluumaadka aan kaa aruurinno adiga. Marka la eego isticmaalkaaga Adeegyadeena, waxaan si otomatig ah u ururin karnaa macluumaadka soo socda, kuwaas oo qaar ka mid noqon karaan ama ay ku jiri karaan macluumaad shaqsiyeed:
faahfaahinta macaamillada aad fuliso markaad isticmaaleyso Adeegyadeena, oo ay ku jiraan goobta juqraafiyeed ee ay ka billowday macaamilku;
macluumaadka farsamada, oo ay ku jiraan cinwaanka borotokoolka internetka (IP) ee loo isticmaalo isku xirka kombuyuutarkaaga internetka, macluumaadkaaga soo galida, nooca biraawsarka iyo noocaaga, dejinta aagaaga, noocyada fiilada biraawsarka iyo noocyada, nidaamka hawlgalka iyo madal;
Macluumaadka ku saabsan booqashadaada, oo ay ku jiraan Soo-dhawaadayaasha Kheyraadka Lebiska Guud (URL) oo gujinaya, marinaya iyo ka imanaya Websaydhadeenna ama App (oo ay ku jiraan taariikhda iyo waqtiga); alaabooyinka aad daawatay ama raadisay; waqtiyada jawaabta bogga, khaladaadka soo dejinta, dhererka booqashooyinka boggaga qaarkood, macluumaadka isdhaxgalka bogga (sida xoqidda, qasabno, iyo jiir-ka-bax), iyo hababka loo adeegsado in laga baaraandego bogga iyo nambarka taleefan kasta ee loo isticmaalo in lagu waco lambarkayada Taageerada Macaamiisha. .
Macluumaadka aan ka helno ilo kale. Waxaa laga yaabaa inaan helno macluumaad adiga kugu saabsan haddii aad isticmaasho mid ka mid ah degellada kale ee aan ka shaqeyno ama adeegyada kale ee aan bixinno. Waxaan sidoo kale si dhow ula shaqeyneynaa dhinacyada saddexaad waxaana laga yaabaa inaan ka helno macluumaad adiga kugu saabsan.
bangiyada aad u isticmaasho inaad lacag noogu soo wareejiso ayaa na siin doona macluumaadkaaga aasaasiga ah ee shakhsiyadeed, sida magacaaga iyo cinwaankaaga, iyo sidoo kale macluumaadkaaga maaliyadeed sida faahfaahinta koontadaada bangiga;
wada-hawlgalayaasha ganacsiga ayaa na siin kara magacaaga iyo cinwaankaaga, iyo sidoo kale macluumaadka maaliyadeed, sida macluumaadka bixinta kaarka;
shabakadaha xayeysiinta, bixiyeyaasha falanqaynta iyo bixiyeyaasha macluumaadka raadinta ayaa na siin kara macluumaad been abuur ah oo adiga kugu saabsan, sida xaqiijinta sida aad ku heshay degelkeenna;
wakaaladaha tixraaca amaahdu nama siinayaan wax macluumaad shakhsi ah oo adiga kugu saabsan laakiin waxaa loo isticmaali karaa in lagu caddeeyo macluumaadka aad na siisay.
Macluumaadka shabakadaha warbaahinta bulshada. Haddii aad gasho Adeegyadeena adoo adeegsanaya koontadaada warbaahinta bulshada (tusaale ahaan, Facebook ama Google) waxaan heli doonaa macluumaad la xiriira oo lagama maarmaan u ah awood u siinta Adeegyadeena oo aan ku xaqiijinno. Shabakadda warbaahinta bulshada ayaa na siin doonta marinno macluumaad gaar ah oo aad siisay iyaga, oo ay ku jiraan magacaaga, sawirkaaga iyo cinwaanka emaylka. Waxaan u isticmaalnaa macluumaadka noocaas ah, oo ay weheliso macluumaad kasta oo kale oo aad si toos ah noo siiso markii aan diiwaangelineyno ama adeegsaneyno Adeegyadeena, si aan u abuurno koontadaada oo aan kula soo xiriirno macluumaadka, badeecooyinka iyo adeegyada aad naga codsato. Waxa kale oo aad awood u yeelan kartaa inaad si gaar ah u codsato inaanu marin u helno xiriirada ku jira koontadaada warbaahinta bulshada si aad ugu dirtid xiriirinta tixraaca qoyskaaga iyo asxaabtaada. Waxaan u adeegsan doonnaa, shaaca ka qaadi doonnaa oo kaydin doonnaa dhammaan macluumaadkan si waafaqsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Alaabtayada iyo adeegyadeena waxaa loogu talagalay dadka waaweyn 18 sano iyo wixii ka weyn oo aan loogu talagalin carruurta. Kama ogaaneyno inaan macluumaad ka ururineyno kooxdan da 'ahaan. Qayb ka mid ah hawsha xaqiijinta ayaa ka hortageysa Bancaneo ururinta xogta noocaas ah. Haddii wax macluumaad ah laga soo ururiyo ilmaha iyada oo aan la xaqiijin oggolaanshaha waalidka, waa la tirtiri doonaa.
Sideen u ilaalinaa macluumaadkaaga
Waxaan u adeegsanaa adeege amaan ah si aan u keydinno macluumaadkaaga shakhsiyeed. Dhammaan macluumaadka aad na siiso waxaa lagu kaydiyaa adeegeyaashayada aaminka ah.
Sidaad ogaan doontid, gudbinta macluumaadka ee internetka ma aha mid gebi ahaanba ammaan ah. In kasta oo aan ku dadaali doonno sidii aan u ilaalin lahayn macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed, haddana ma ballan qaadi karno amniga macluumaadkaaga inta lagu jiro gudbinta, iyo gudbinta kastaaba waxay ku jirtaa qatar adiga ah. Markii aan helno macluumaadkaaga, waxaan adeegsan doonnaa hanaan adag iyo astaamaha amniga si aan isugu dayno inaan uga hortagno marinka aan la oggolaan.
Waxaan si joogto ah wax u barnaa una tababarannaa shaqaalaheena muhiimada qarsoodiga iyo asturnaanta macluumaadka shakhsiyeed ee macaamiisha. Waxaan ilaalineynaa ilaalin jireed, mid elektiroonig ah iyo nidaam oo waafaqsan sharciyada iyo xeerarka ku habboon si loo ilaaliyo macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Adeegsiga laga sameeyay macluumaadka
Waxaan macluumaadkaaga ugu adeegsanaa qaababka soo socda:
si loo fuliyo waajibaadkayaga la xiriira qandaraaskaaga anaga oo aan ku siino macluumaadka, wax soo saarka iyo adeegyada;
inaad u hogaansanaato wixii sharci ah iyo / ama shuruudaha sharciyeynta oo ay ku jiraan sharciyada ka baxsan dalka aad degan tahay ama aad u hoggaansamayso hanaan sharciyeed kasta;
si aan kuu ogeysiiyo isbeddelada ku yimid Adeegyadeena;
si loo habeeyo Adeegyadeena iyo macluumaadka aan ku siino, iyo inaad wax ka qabato baahiyahaaga - sida waddankaaga cinwaankaaga iyo taariikhda macaamil ganacsi. Tusaale ahaan, haddii aad had iyo jeer lacag uga dirto hal lacag oo gaar ah mid kale, waxaan u isticmaali karnaa macluumaadkan inaan kugu wargalino cusboonaysiinta badeecada cusub ama astaamaha waxtar kuu yeelan kara;
iyada oo qayb ka ah dadaalkeena si aan u ilaalino Adeegyadeena amaan iyo badbaado;
si loo maamulo Adeegyadeena iyo howlaha gudaha, oo ay ku jiraan cilad bixinta, falanqaynta xogta, baaritaanka, cilmi baarista, ujeedooyinka tirakoobka iyo sahaminta;
si loo horumariyo Adeegyadeena loona hubiyo in loo soo bandhigo sida ugu wax ku oolka badan;
si loo cabiro ama loo fahmo wax ku oolnimada xayeysiinta aan u adeegno iyo inaan kuu soo bandhigno xayeysiinta kugu habboon;
in laguu oggolaado inaad ka qaybqaadatid astaamaha is-dhexgalka ee Adeegyadeena, markaad doorato inaad sidaa sameyso;
si ay noogu ogolaato inaan raadino dawooyinka la heli karo ama aan xadidno waxyeelooyinka aan sii wadi karno iyo inaan dhaqan galino shuruudaha iyo xaaladaha
si aan kuu siino macluumaad kusaabsan dadaalkeena udoodida siyaasada guud.
inaan ku siinno macluumaad ku saabsan badeecadaha iyo adeegyada kale ee la midka ah ee aan bixinno;
inaan ku siino, ama u oggolaano dhinac saddexaad oo la xushay inay ku siiyaan, macluumaad ku saabsan badeecado ama adeegyo aan dareemeyno inay ku xiiseynayaan; ama
isku darka macluumaadka aan ka helno ilo kale iyo macluumaadka aad na siiso iyo macluumaadka aan kaa aruurinno. Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadkan iyo macluumaadka isku dhafan ujeedooyinka kor lagu soo sheegay (waxay kuxirantahay noocyada macluumaadka aan helno).
Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga dhinacyada saddexaad ee la xushay oo ay ka mid yihiin:
gacan-yareyaasha, shuraakada ganacsiga, alaab-qeybiyeyaasha iyo qandaraasleyda waxqabadka iyo fulinta qandaraas kasta oo aan la galno iyaga ama adiga;
xayeysiiyaasha iyo shabakadaha xayeysiinta kaliya si ay u doortaan uguna adeegaan xayeysiinta adiga iyo kuwa kaleba;
falanqaynta iyo bixiyeyaasha mashiinka raadinta ee naga caawiya hagaajinta iyo hagaajinta bartayada; iyo
hay'adaha kooxdeena ama kuwa hoos yimaada
Waxaan u siideyn karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed dhinacyada saddexaad:
haddii ay dhacdo inaan iibinno ama iibsanno ganacsi ama hanti kasta, taas oo ay dhici karto inaan shaaca uga qaadno xogtaada shaqsiyeed iibiyaha ama iibsadaha ganacsi ama hanti noocaas ah;
haddii ay waajib nagu tahay inaan kashifno ama wadaagno xogtaada shakhsi ahaaneed si aan ugu hoggaansano wixii waajibaad sharci ah. Tan waxaa ka mid ah is-weydaarsiga macluumaadka shirkadaha kale iyo hay'adaha ujeeddooyinka ilaalinta khayaanada iyo yareynta halista amaahda;
si ay nooga caawiso sameynta ama wada shaqeynta baaritaanka khiyaanada ama howlaha kale ee sharci darrada ah halkaas oo aan aaminsanahay inay macquul tahay oo ay habboon tahay in sidaas la sameeyo;
si looga hortago loona ogaado khayaanada ama dambiga;
iyadoo laga jawaabayo amar maxkamadeed, waaran, amar maxkamadeed, ama mid kale Bancaneo sharcigu u baahan yahay;
si loo qiimeeyo khataraha maaliyadeed iyo caymiska, iyo in la ilaaliyo hawlgalladayada iyo kuwa aan la leenahay;
si ay noogu oggolaato in aan ku raad-joogno daawooyinka la heli karo ama aan u xaddidno dhaawacyada aan haysanno
inaad ka soo ceshato deynta ama la xiriirta caymiskaaga; iyo
si loo horumariyo xiriirka macaamiisha, adeegyada iyo nidaamyada.
Ma lihin liis daabacan oo ku saabsan dhammaan dhinacyada saddexaad ee aan la wadaagno xogtaada, maadaama tani ay si weyn ugu tiirsan tahay isticmaalkaaga gaarka ah ee Adeegyadeena. Si kastaba ha noqotee, haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cidda aan la wadaagnay xogtaada, ama lagu siinayo liis adiga kuu khaas ah, waad codsan kartaa tan adoo u qoraya info@bancaneo.org.
Wadaagista iyo keydinta xogtaada shaqsiyeed
Xogta aan kaa soo aruurineyno waxaa loo gudbin karaa, laguna keydin karaa, meel loo aado meel ka baxsan Mareykanka. Waxaa sidoo kale u isticmaali kara shaqaalaha ka shaqeeya meel ka baxsan Mareykanka ee noo shaqeeya ama mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaashayada. Shaqaalaha noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa inay ku hawlan yihiin, waxyaabo ay ka mid yihiin, fulinta amarkaaga bixinta, ka shaqeynta faahfaahinta lacag bixintaada iyo bixinta adeegyada taageerada. Soo gudbinta macluumaadkaaga shakhsiyeed, waxaad ogolaatay wareejintan, kaydinta ama ka shaqeynta. Waxaan qaadi doonaa talaabooyin kasta oo macquul ah si loo hubiyo in macluumaadkaaga loola dhaqmo si aamin ah oo waafaqsan siyaasadan asturnaanta.
Waxaan u adeegsanaa faylal yaryar (oo loo yaqaan 'cookies) si aan kaaga soocno isticmaaleyaasha kale, arag sida aad u isticmaasho bartayada iyo alaabteena adiga oo ku siinaya khibrada ugu fiican. Waxay sidoo kale awood noo siineysaa awooda lagu hagaajinayo adeegyadeena, macluumaadka faahfaahsan ee ku saabsan buskudka iyo teknoolojiyada kale ee aan u isticmaalno iyo ujeedooyinka aan u adeegsanno iyaga arag Siyaasadda cookie.
Sida hay'ad maaliyadeed oo nidaamsan, Bancaneo sharciga ayaa u baahan inuu kaydiyo qaar ka mid ah macluumaadkaaga shaqsiyeed iyo macaamil ganacsi wixii ka baxsan xiritaanka akoonkaaga annaga, hoos ka eeg xuquuqdaada. Xogtaada waxaa kaliya oo lagu galayaa gudaha iyada oo loo baahan yahay in la ogaado aasaaskeeda, waana la heli doonaa ama la baaraandegi doonaa oo keliya haddii gebi ahaanba loo baahdo.
Waxaan marwalba tirtiri doonaa xogta aan hadda looga baahneyn sharci ama awood aan ku shaqeyno.
Xuquuqda Ilaalinta Macluumaadka ee GDPR
Bancaneo waxaa ka go'an hubinta in si cadaalad ah oo hufan loo shaqeeyo. Taasi waa sababta ay muhiim noogu tahay in maadooyinka xogta aysan ku dhaqmi karin oo keliya xuquuqdooda diidmada laakiin sidoo kale xuquuqaha soo socda ee ay ku qanacsan yihiin shuruudaha sharciga ah:
Xuquuqda macluumaadka, Qod. 15 ee GDPR
Xaqa sixitaanka, Qod. 16 ee GDPR
Xuquuqda in la tirtiro ("Xaq u leeyahay in la illoobo"), Qod. 17 ee GDPR
Xuquuqda xaddidaadda hawsha, Qod. 18 ee GDPR
Xuquuqda gudbinta xogta, Qod. 20 ee GDPR
Xuquuqda diidmada, Qod. 21 ee GDPR
Si aad u adeegsato xuquuqdaada, fadlan nala soo xiriir sida ku cad qaybta "Nala Xiriir" ee hoose.
Si aad u awoodo inaad ka baaraandegto codsigaaga, iyo sidoo kale ujeedooyin aqoonsi, fadlan ogow inaan u adeegsan doonno macluumaadkaaga shakhsiyeed si waafaqsan Qod. 6 para. 1 (c) ee GDPR.
Waxaad sidoo kale xaq u leedahay inaad dacwad ka gudbiso hay'ad kormeer iyadoo la raacayo Qod. 77 GDPR oo lagu daray Qaybta 19 GDPR.
Xuquuqda la xiriirta Kaalifoorniya
Ogeysiiska Sharciga Asturnaanta Macaamiisha Kaalifoorniya
Ogaysiiskan, waxaan wax uga qabaneynaa shuruudaha shaacinta ee hoos imanaya Xeerka Asturnaanta Macaamiisha Kalifoorniya (CCPA) ee loogu talagalay dadka deggan California. Ogeysiiskan waa in si wada jir ah loogu akhriyo Bayaankayaga Asturnaanta wuxuuna khuseeyaa dhammaan dadka deggan California ee soo booqda Websaydhadeenna ama adeegsada Adeegyadeena.
Ururinta Xogta Shakhsiyeed iyo Ujeedooyinka Isticmaalka: Waxaan ururinaa, isticmaalnaa oo wadaagnaa xogta shaqsiyadeed ee dadka degan California sida kor lagu sharaxay.
Sharciga Qarsoodiga Macaamiisha ee Kaalifoorniya
Hadda oo aad ogtahay sida aan u ururino, u isticmaalno una wadaagno macluumaadkaaga shakhsiyeed, CCPA waxay siisaa dadka deggan California xuquuq gaar ah oo ku saabsan macluumaadkooda shaqsiyeed. Qaybtani waxay sharraxaysaa xuquuqdaada CCPA waxayna sharraxaysaa sida loogu dhaqmo xuquuqdaas. Intaas waxaa sii dheer, sharciga California Shine the Light (CA Civ. Code § 1798.83) wuxuu nooga baahan yahay inaan siino dadka degan California, markay codsadaan, magacyada iyo cinwaanada dhinacyada saddexaad ee helay macluumaadka shakhsiga iyo qaybaha macluumaadka shakhsiyeed ee la wadaago.
Dadka degan California waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan in MM BITINVEST OU uu shaaca ka qaado macluumaadka shaqsiyadeed Bancaneo uruurisay, isticmaashay, shaacisay, oo iibisay 12kii bilood ee la soo dhaafay. Mar alla markii aan helno oo aan xaqiijinno dalabkaaga macaamil ee la xaqiijin karo, waxaan kuu soo bandhigi doonnaa macluumaadka lagama maarmaanka u ah qaab la qaadi karo oo si fudud loo heli karo, sida caadiga ah 45 maalmood gudahood markii la codsado. Waxaad sameyn kartaa oo keliya dalab macaamil oo la xaqiijin karo oo ah marin u helid ama xog qaadid laba jeer muddo 12 bilood gudahood ah.
Markii aan bixinayno macluumaad hoosta xuquuqda in la ogaado, waxaan ku dari doonnaa:
Noocyada macluumaadka shakhsiga ah ee meheraddu ka ururiso macaamilka oo ay shaacisay ama u iibisay ujeeddo ganacsi
Qaybaha ilaha macluumaadka shakhsiyeed ee macaamilka
Ujeedada ganacsi ama ganacsi ee uruurinta iyo iibinta macluumaadka shaqsi ee macaamiisha
Noocyada dhinac kasta oo saddexaad oo ganacsigu la wadaago macluumaadka shakhsiyeed ee macaamilka ama cidda macluumaadka shakhsiyadeed laga iibiyo
Qaybaha gaarka ah ee macluumaadka shakhsiyeed ee laga soo ururiyey macaamiisha
Dadka degan California sidoo kale waxay xaq u leeyihiin inay codsadaan in la tirtiro xogtooda shakhsiga ah, iyadoo laga duulayo waxyaabo gaar ah marka laga reebo, lagamana takoori karo sababtoo ah waxay adeegsadaan xuquuqdooda sida uu qabo Sharciga Asturnaanta Macaamiisha Kaliforniya. Waxaan u baahan karnaa inaad na siiso xog shaqsiyadeed oo dheeri ah si loo xaqiijiyo aqoonsigaaga ka hor inta aan la baarin codsigaaga; kama shaqeyn karno dalabkaaga haddii aan awoodi karin inaan xaqiijino aqoonsigaaga.
Dadka degan California sidoo kale waxay xaq u leeyihiin inay ka baxaan iibinta macluumaadka shaqsiyeed. Laba iyo tobankii (12) bilood ee kahoreeyay Bancaneo ma iibin wax macluumaad shakhsi ah.
Haddii aad tahay degane Kaalifoorniya oo aad jeceshahay inaad codsi samayso, fadlan ku soo gudbi codsigaaga, qoraal ahaan, inaad: info@bancaneo.org.
Waxaad sidoo kale ku soo gudbin kartaa qaababkan su'aalahaaga ama waxaad ku muujin kartaa walaac ku saabsan BancaneoSiyaasadaha iyo dhaqannada gaarka ah.
Adeegyadeena waxaa laga yaabaa, marba marka ka dambeysa, inay ku jiraan xiriiriyeyaal iyo ka imanaya degellada shabakadaha wada-hawlgalayaasha, xayeysiistayaasha iyo kuwa la shaqeeya. Haddii aad raacdo xiriiriye mid ka mid ah degelladan internetka, fadlan la soco in degelladani ay leeyihiin siyaasado u gaar ah oo u gaarka ah iyo in aanaan aqbali doonin wax masuuliyad ah oo iyaga ku saabsan. Fadlan hubi siyaasadahaan kahor intaadan u gudbin wixii xog shaqsiyeed bogaggaan internetka.
Isbedelada lagu sameeyo siyaasadaheena gaarka ah
Si loola socdo dhaqamada ugu fiican, sharci cusub, iyo isbeddelada ku saabsan sida aan u ururino una isticmaalno macluumaadka shakhsiyeed, waxaa laga yaabaa inaan wax ka beddelno Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waqti ka waqti. Haddii aan isbedel ku sameyno Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, waxaan ku dhejin doonnaa bogga qaanuunka arrimaha gaarka ah oo aan cusbooneysiin doonnaa taariikhda "Cusboonaysiinta Ugu Dambeysa". Si aad ula socoto wixii isbeddel ah, fadlan dib u hubi xilliyo. Adeegsiga adeegyadeena ka dib isbedeladan micnaheedu waa inaad aqbasho Siyaasadda Asturnaanta ee dib loo eegay. Haddii aad jeclaan lahayd inaad dib u eegto nooca Nidaamka Asturnaanta ee dhaqan galay isla markiiba ka hor dib-u-eegidgan, fadlan nala soo xiriir info@bancaneo.org.
Su'aalaha, faallooyinka iyo codsiyada ku saabsan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waa la soo dhaweynayaa waana in lala tacaalayaa kooxdayada asturnaanta caalamiga ah cinwaanka emaylka soo socda - info@bancaneo.org.